Switzerland: Kulanka Dhaqaalaha Dunida oo ka socda Davos – Kasmo Newspaper
Switzerland: Kulanka Dhaqaalaha Dunida oo ka socda Davos
Updated - January 19, 2017 10:43 am GMT
Sannad kasta, laga soo bilaabo 1971kii, madaxda hoggaamisa caalamka iyo wakiillada dunida dhaqaalaha ayaa ku shira Switzerland, si ay uga doodaan arrimaha markaas taagan ee dhaqaalaha.
Sannadkaan shirka oo ka socda Davos, inta u dhexaysa 17ka ilaa 20ka Jenaayo, qodobbada muhiimka ah waxaa ka mid ah: calemasaarla Donald Trump, ka bixitaanka Uk ee Midowga Yurub iyo Shiina oo markii u horreysay Madaxweyne Xi Jiping, shakhsi ahaan u matalayo.
Ra’iisal Wasaaraha Britain Theresa May oo ka mid ah madaxdii maanta ka hadashay ayaa sheegtay in ujeeddada Britain tahay sidii ay hoggaanka ugu qaban lahayd ganacsiga xorta ah ee Dunida.
Mase macnayn sida ay taasi ku suuragali karto, iyada oo xuduudihii kastamka albaabbada loo xirayo isla markaasna loo taaganyahay difaaca ganacsiga xorta ah.
Maamulayaasha Bankiyada Ubs iyo Hsbc sooma dhoweyn fikraddaas, waxayna caddeeyeen in midkiiba 1,000 shaqaale kala bixi doono London, halka Shirkadda Goldman Sachs ee maalgalinta Bankiyadu lagu warramayo in ay dhimi doonto kala bar xafiisyadeeda Britain.
Dad badan ayaana u arka in iyada oo ah Ra’iisal Wasaare taariikhdu ku xukuntay in ay Uk ka saarto Yurub, Davos oo hore ay u liidi jirtay u noqotay maanta marin khasab ah oo ay u sii marto beesha dhaqaalaha adduunka.
Lafagurayaasha ayaa fikradda May u tarjumaya in ka bixitaanka Yurub tahay waddada qur ah ee dadka nasiibka an u helin ee Britain loogu abuuri karo shaqooyin, looguna soo celin karo karaamadoodii.
Dhanka kale, Caalamiyaynta (Globalization) ee sida caddaanka ah uu uga hadlay Madaxweynaha Shiinaha Xi Jiping dad badan ayaa dhibsanaya, kuwaas oo u arka in shaqooyinkoodii laga dafayo, mushaarkoodiina hoos u dhac ku imaanayo.
Laakiin Dunidu hadal uma baahnee waxay u baahantahay wax qabad keeni kara isbeddel nolol fiican u abuuri kara dadka oo idil ee an kooxo yar oo qur ah kobcinayn.
Haddaba waa maxay kulanku maxayse tahay ahmiyadda uu leeyahay?
World Economic Forum waa Mu’asassad an faa’ido doon ahayn oo xarun ku leh magaalada Cologny ee Galbeedka Switzerland, waana mid ka mid ah kulammada Caalamiga ah ee looga hadlo dhaqaalaha iyo horumarinta.
Waxaa sannadkii 1971kii asaasay Prof. Klaus Schwab oo u dhashay dalka Jarmalka, waxaana markaas lagu magacaabi jiray “European Management Forum”,
Kulankii u horreeyay oo Caalami ah waxaa waagaas lagu qabtay magaalada yar ee Davos oo ku taalla buuralayda Switzerland, waxaana ka soo qaybgalay 444 xubnood oo matalaysa hantiilayaasha Yurubtii Galbeed. Ujeeddada Mu’asasadda iyo munaasibadduba waxay ahayd sidii hannaanka dhaqaalaha iyo ganacsatada reer Yurub u dhex gali lahaayeen midka Amerika, ugana faa’ideysan lahaayeen.
Hase yeeshee ciriirigii Tamareed (Energy Crisis) ee sannadadii 70nadii wuxuu ku soo biiriyay kulammadii hay’addan doodo cusub, sida Tamarta, sidaa darteed, sannadkii 1987kii magaciisu wuxuu isu baddelay midka hadda loogu yeero: World Economic Forum.
Wixii intaa ka dambeeyay, kulammada Davos waxay noqdeen fursado madaxda Caalamka iyo Wakiillada Shirkadaha Waaweyn uga doodaan arrimaha dhaqaalaha Dunida. Sababta Davos loogu doortayna waa iyada oo la tixgaliyay dhexdhexaadnimada Switzerland oo noqotay goob ku habboon qabashada kulammo Caalami ah.
Marka laga reebo madaxda Caalamka qaarkeed, ka soo qaybgalayaasha oo gaaraya 2,000 waxaa ka mid ah wakiillada Shirkadaha waaweyn ee Dunida, kuwaas oo ilaa $25,000 oo Dollar ku bixiya, si ay uga soo qaybgalaan.
Waxaa kale oo ka soo qaybgala xubno laga yaqaanno caalamka Masraxiyadda iyo Fanka, oo uga qayb qaata arrimo bulshada iyo deegaanka khuseeya.